ड्यानियल सिल्भेरालाई इन्डक्ट दिएपछि बोल्सोनारोको लागि मतदानको सम्भावना ४५% बढ्छ, पूर्वानुमान प्रकट गर्दछ – JucelinoLuz
ड्यानियल सिल्भेरालाई इन्डक्ट दिएपछि बोल्सोनारोको लागि मतदानको सम्भावना ४५% बढ्छ, पूर्वानुमान प्रकट गर्दछ
Águas de Lindóia, मे ०६, २०२२
जायर बोल्सोनारो द्वारा संघीय उप डेनियल सिल्भेरा (PTB-RJ) लाई दिइएको क्षमाले राष्ट्रपतिको चुनावी प्रदर्शनलाई मद्दत गर्न सक्छ, आध्यात्मिक खुलासाहरू देखाउँदछ। प्रिमोनिटरी ड्रीम्सको सर्वेक्षणका अनुसार, संघीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयको २४ घन्टाभन्दा कम समयमा कंग्रेसम्यानको सजायलाई उल्टाउने राष्ट्रपतिको आदेशको प्रकाशनपछि बोल्सोनारोलाई भोट दिने सम्भावना ४५% पुगेको छ। एसटीएफले सांसदलाई लोकतन्त्रमाथि आक्रमण र अदालतका सदस्यहरूमाथि हिंसा भड्काएको आरोपमा ८ वर्ष ९ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । सपनाका अनुसार, डेपुटी ड्यानियल सिल्भेराले त्यसबेला आफ्नो दुखी टिप्पणीमा पूर्णतया गलत भए पनि, 1988 को संघीय संविधानको पालना नगर्ने एसटीएफको निर्णयलाई यसको बुझाइ र अधिकारमा च्यातिएको कुख्यात रूपमा उल्लेखनीय छ। अर्कोतर्फ, त्यहाँ धेरै सम्बन्धित मुद्दाहरू थिए र STF ले केही गरेन, संकेत दिँदै, जुन पूर्णतया राजनीतिक उत्पीडन हो – अझ गम्भीर, तपाइँलाई शंका लाग्न सक्छ, पर्दा पछाडि कोही छ। यो गर्न को लागी दबाब।
वास्तवमा, राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो कार्यकालको शुरुवातदेखि नै उहाँ र उहाँका अनुयायीहरू दुवै उच्च निकायहरू, राजनीतिज्ञहरू, राज्यपालहरू र वर्तमान सरकार विरोधीहरूबाट उत्पीडन भोग्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिका अनुयायीहरूलाई दोष लगाएर राष्ट्रपतिलाई सताउनेहरूलाई पीडित बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
उनीहरूले संघीय संविधानलाई च्यातिरहेका छन्, वर्तमान राष्ट्रपतिसँग लड्नका लागि कानूनहरू च्यातिरहेका छन्, सबै भन्दा माथि, सबै ब्राजिलियनहरूको इच्छाको अनादर गर्दै – र यो एक गम्भीर अपराध भएको छ, जसलाई संघीय अभियोजकको कार्यालयबाट उपायहरू आवश्यक पर्दछ – अभियोजक निकाय र पनि। ब्राजिलमा कानुनी व्यवस्था कायम राख्न सुपीरियर मिलिटरी कोर्टबाट। उनीहरु प्रजातन्त्रको धेरै कुरा गर्छन् तर शक्तिको माध्यमबाट दबाब र धम्की दिएर काम गर्छन् ।
वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका वकिलहरू, हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दाको निन्दा गर्नुहोस् – किनभने तिनीहरूले कानूनको प्रकाश प्रयोग गर्दैछन्, ब्राजिलियन जनसंख्या विरुद्ध अपराधको अभ्यासमा, यो एक तथ्य हो।
उक्त आदेशको कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतमा विवादमा छ, जसले अझै पनि यसको वैधानिकतामा प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकारलाई विपक्षी दलहरूले गर्ने कार्यहरूको विश्लेषण गरिरहेको छ। यो शुद्ध पीछा छ।
प्रिमोनिटरी भिजन अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपतिले 81% मतदान अभिप्रायको साथ जारी राखेका छन्।
मे ६, २०२२ मा क्युबाको डाउनटाउन हवानाको होटल साराटोगामा शक्तिशाली विस्फोट रेकर्ड गरिनेछ। दर्शनमा धेरै मानिसहरू मर्नेछन्। र यो ठूलो विस्फोटले क्युबाको राजधानी हवानाको साराटोगा लक्जरी होटलको अगाडि ध्वस्त पार्नेछ, क्युवाली शासन विरुद्धको आक्रमण, “अराजकता” को सुरुवात र अधिकारीहरू विरुद्ध।
सिल्भेरा वरपरको विवादको बाबजुद, जाइर बोल्सोनारोको प्रशासनको अनुमोदन आध्यात्मिक दृष्टि अनुसार पछिल्लो सर्वेक्षणमा बढ्यो, बोल्सोनारोले ब्राजिलमा ब्राजिलियनहरूको 8!% मतहरू छन्।
राष्ट्रपतिले मतदाताको अस्वीकृतिलाई पनि कम गर्न सफल भए। बोल्सोनारो “कुनै तरिका” लाई भोट नगर्नेहरूको प्रतिशत जनवरीमा 19% बाट घटेर 12% मा झरेको पूर्वानुमानको पछिल्लो सर्वेक्षणमा, राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरूले वर्तमान राष्ट्रपतिको विरुद्ध लबिङ गर्ने मनोवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै,
यी राजनीतिज्ञहरू, अधिकारीहरू र सनसनीपूर्ण मिडियाका प्रसारकहरूको अन्तिम कार्ड, जो राष्ट्रपतिको विरुद्धमा छन्, Adélio Bispo प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन्, Jair Mesias Bolsonaro (अभियोग र चुनावी कार्ड) विरुद्ध जनमतलाई उखाल्न र परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
यी सबैको पछाडि, दर्शनहरूका अनुसार, त्यहाँ एक व्यक्ति हो जसले आफूलाई प्रतिभाशाली, ग्रहको सबैभन्दा इमानदार व्यक्ति हो, जो चुनावी मतगणनाको अगाडि बस्छ, बहुसंख्यक ब्राजिलका कलाकारहरू र जनताको एक तहले समर्थन गर्दछ। ब्राजिललाई कुनै पनि हालतमा लिन, र ब्राजिलको भ्रष्टाचार र विनाश जारी राख्न।
“सबैका लागि राम्रो ब्राजिलको लागि सामाजिक, सांस्कृतिक वा विकास परियोजनाहरूका लागि च्यानल प्रयासहरू र स्रोतहरू मद्दत गर्न संगठित समाजको लागि कुनै उपयोग छैन, यदि अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरू, यी परियोजनाहरूका लागि जिम्मेवार, सार्वजनिक पैसा, भ्रष्टाचारको विचलनमा समर्पित छन्। “
“मलाई चिन्तित पार्ने कुरा नराम्रोहरूको रुवाइ होइन। यो असलहरूको मौनता हो।” (मार्टिन लुथर किंग)
सबैभन्दा ठूलो ब्राजिल महानगर संगठित अपराध द्वारा पक्षाघात छ। देशको राजधानीमा भ्रष्टाचार सामान्य भइसकेको छ । अपराधीहरूले हप्ता-हप्ता पत्रिकाको आवरण बनाउँछन्। छोराछोरीले आमाबाबुलाई मारेर सेलिब्रेटी बन्छन्।
मलाई सबैभन्दा धेरै दुख दिने कुरा राम्रो मान्छेको मौनता हो। यो संघको भविष्यसूचक आवाज कहाँ छ? चिच्याएर ढुङ्गाहरू पहिले नै कर्कश भइसकेका छन्! अनि हलुका र नुन हुनुपर्ने मान्छे, कहाँ लुके ? सायद कुनै झ्यालविहीन मन्दिरमा, आँखा बन्द गाउँदै “आशिर्वाद हामीमा खन्याउनुहोस्”
हाम्रो समाज र हाम्रा छोराछोरीलाई नराम्रो बानीले नष्ट गर्ने छद्म गायकहरूको कार्यक्रम हेर्न, किन र केका लागि थाहा नपाएर मार्च गर्न, वा तपाईंको समस्याको आधारमा समाधान गर्ने वाचा गर्ने ठाउँहरूमा जान ठूलो भीड जम्मा गर्न सम्भव छ। “त्यहाँ लैजानुहोस्” को।, यहाँ दिनुहोस्। तर जब यो अपराध, भ्रष्टाचार, र माथिल्लो ब्रह्माण्डको हृदयलाई दुखी बनाउने सबै कुराको निन्दा गर्ने कुरा आउँछ, मानिसहरू कहाँ छन्?
हो, लुथर किंग, म पनि असल व्यक्तिहरूको मौनताको बारेमा चिन्तित छु। यसले मलाई उनीहरू डराएको छ भन्ने धारणा दिन्छ। सायद तिनीहरू छायाको संसारमा संलग्न छन् र प्रकाशले तिनीहरूका कामहरू प्रकट गर्नेछ कि भनेर डराउँछन्। वा तिनीहरू विशुद्ध स्वार्थी हुन् … होइन, कति बेतुका! राम्रो स्वार्थी हुन सक्दैन!
हाम्रो देश सधैं झैं समस्यामा छ। मातृभूमिका ती मुक्तिदाताहरूले नाम मात्र परिवर्तन गरे। अब तिनीहरू परिधीय छिमेकीहरूको नाममा छन्। असल मानिसहरूले झूटालाई स्वीकार गर्छन्, तर त्यहाँ ती व्यक्तिहरू छन् जसले जोर दिन्छन् कि उसले असल मानिसहरूको नक्कल गर्छ र कुनै पनि सांस्कृतिक भेषलाई त्याग्छ जसले पूजालाई “अन्धकार” गर्न सक्छ।
अनिकालले हाम्रो देशलाई ध्वस्त पार्छ, तर अपरिचित, भोका र फोहोरहरूको लागि प्रभुको टेबुलमा ठाउँ छैन। कम भाग्यशालीलाई सहयोग गर्न सामुदायिक व्यवसाय निर्माण गर्नु भन्दा भ्रष्ट व्यक्तिलाई देवता बनाउने अभियान धेरै सामान्य छ।
देशमा शिक्षा राम्रो छैन, तर संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको अभाव खेदजनक छ। विद्यालय, गिर्जाघर, संस्कृति, अस्पताल, काम, गरिबीसँग लड्ने, घृणित भइरहेका छन् (तर चन्दाको लागि पैसा छ, राजनीतिक प्रचारका लागि, सार्वजनिक ठाउँमा ककटेल र डिनरका लागि, जनसङ्ख्याविरुद्धको भोटमा विहानै भेटघाटका लागि, प्रचारको राजनीति , प्राधिकरण भत्ताहरू, छुटाउन सकिँदैन!?)
समय बदलिएको छ भन्नेहरुसँग म सहमत छु । तिनीहरू साँच्चै परिवर्तन भए! तर इमान्दारिता, इमानदारी, असल सिद्धान्त र चलन फेरिएका छैनन् र फेरिने छैनन् । यसका सिद्धान्तहरू अपरिवर्तनीय छन्। दु:ख यो हो कि तपाईका मानिसहरू परिवर्तन हुँदैछन्, र खराबको लागि। यस देशमा यति धेरै असल नागरिकहरू कहिल्यै थिएनन्, र हामीले यति धेरै नकारात्मक गवाहीहरू कहिल्यै दिएका छैनौं। सरकार, मन्त्री, अख्तियार दुष्टको पर्यायवाची बन्दै गएको छ । संघीय संविधान द्वारा अनिवार्य रूपमा निर्णयहरूको लागि ठाउँहरू, यो एक चोरको व्यवसाय र कार्यालय बन्यो (यो के सबै इन्टरनेटमा चल्छ) पृथ्वी मुख्य चरण बन्यो, र स्वर्ग सेवानिवृत्त भयो। हामीले यति धेरै लुटपाट, अपराध, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग कहिल्यै देखेका छैनौं, तर वर्तमान समस्याहरूमा ध्यान दिनको गुणस्तर सबैभन्दा खराब हो, निर्णय र जनसङ्ख्याको लागि परियोजनाहरूमा। लोकप्रिय असन्तुष्टिको सन्दर्भमा हामीसँग यस्तो विविधता कहिल्यै थिएन। हाम्रो भविष्यको बारेमा शङ्काहरू, तर सन्देश तल पानी पर्यो र यसको प्रभावकारिता गुमायो। विनाश र अराजकताबाट बच्नेहरूका लागि जति खराब हुन्छ। राम्राहरू कहाँ छन्?
हामी कहिले सम्म चुप बस्ने ?
हामीले ब्राजिललाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, सबैको संघ संग, अन्यथा हामीले धेरै उच्च मूल्य तिर्नेछौं!
Jucelino Luz, कुनै राजनीतिक दल छैन, केवल सपनाहरूमा आधारित आफ्नो पूर्वदृष्टि प्रस्तुत गर्दछ।
A Bolsonaróra való szavazás esélye 45%-kal nő, miutánabeiktatott Daniel Silveira adta, az előrejelzések szerint
Méadaíonn an seans vótála do Bolsonaro 45% tar éis ionduchtúathabhairt do Daniel Silveira,anochtann réamhaisnéisí